Mabhuku eOffreds, iro basa raJosé Ángel Gómez Iglesias | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Type, Mabhuku, Nhetembo
Iwo maOffreds mabhuku ane anopfuura mazana mazana matatu nemakumi matatu emakopi akatengeswa kusvika zvino. Izvi zvinopupurira kubudirira kwayo kwekunyora. José Ángel Gómez Iglesias (Pontevedra, 1984) munyori wechiSpanish ane basa rekunyora rakangoitika. Yakave ichizivikanwa kuburikidza nesocial network (Twitter, kunyanya) kudzamara yasvika kunoshamisa kushambadzira kutengeswa.
Siginecha pasi pezita rekunyepedzera "Zvipo", izvo zvakamuka zvisina kujairika panguva yemutambo wetsamba nemukoma wake. Kuzvininipisa kwake kunoonekwa muzvinyorwa zvake, zvinoratidzwa nhetembo yakananga, yakazara nemanzwiro. Saizvozvowo, maitiro ake ekutamba akabatana neyakareruka mamiriro akaita kuti zvive nyore kune vaverengi vazhinji kuziva nemabhuku ake.
1 Munyori akabuda munhau yedhijitari
2 Vanyori "vanozvarwa" mumasocial network, ndizvo here chiitiko kana maitiro?
3 Mifananidzo uye data pamabhuku anozivikanwa kwazvo eDefreds
4 Maumbirwo emabhuku Anopihwa
5 Synthesis uye kuongororwa kwemamwe emabasa ake
5.1 Zvinenge zvisingatendeseki (2015)
5.2 1775 migwagwa (2017)
5.3 Nyaya dzehypochondriac castaway (2017)
5.4 Nekaseti uye bic pen (2018)
5.5 Nokusingaperi (2019)
Munyori akabuda munhau yedhijitari
Pawebhusaiti yake, Defreds anotsanangura - nekureruka kunomuonesa - matangiro aakaita basa rake rekunyora. Panyaya iyi, inoratidza kuti:
“Husiku hwakazara kusurukirwa uye nemvura zhinji ndiyo yekutanga nguva yandakanyora mutongo nezve chimwe chinhu chaiitika kwandiri panguva iyoyo. Pa twitter. Ini ndinofungidzira ndipo pakatangira zvese. Vanhu vanondiverengera, vachiwedzera uye nekuwedzera. Vanhu vakanzwa kuzivikanwa neni.
“Handina kutenda kuti pane munhu akaverenga pfungwa dzangu nechido. Zvinenge netsaona. Zvinenge ndisina kuzvitsvaga. Zvipo, kuwedzerwa kwaJosé. Mabhuku angu asvika. Iwe haugone kufungidzira kunyepedzera kwainoita, kupinda muchitoro chemabhuku uye kuona bhuku rako pasherufu, ipapo ipapo. Uye vanhu vanozvitenga vachinyemwerera. Izvo hazvigone kubhadharwa nemari. Kwete kutsanangura nemazwi… ”.
Vanyori "vanozvarwa" mumasocial network, ndizvo here chiitiko kana maitiro?
Muchiitiko cheMipiro, inosanganisira zvirevo zvese zviri zviviri. Iyo kuvhura uye kunoshamisa kushambadzira kubudirira kwebhuku rake rekutanga Zvinenge netsaonayanga iri yekugadzirisa chiitiko nekuda kwayo genesis paTwitter. Kuparadzanisa - zvirokwazvo - kubva kune anoyevedza manhamba ekutengesa. Panguva imwecheteyo, maOffreds ndiwo maitiro munyika yanhasi yekunyora. Zvakanaka, iye chikamu cheboka riri kukura revanyori vanoshandisa midhiya midhiya kuti vazvizivise ivo.
Naizvozvo, ivo vanyori vasingavimbe nedzimba dzekutsikisa, kana chero mhando yevarevereri panguva yekutanga mabasa avo ekutanga. Inomiririra modality uko kushambadzira nzira (kana iripo yakagadzirirwa kudaro) inosanganisira yakakosha audiovisual chinhu. Panyaya iyi, zvinyorwa zvakati wandei zvine mutsindo munyika dzakasiyana zvinogona kubvunzwa pa internet zvinosimbisa hunhu uhu.
Pakati peongororo idzi, zvinotevera zvinomira pachena:
Zvinyorwa zvinyorwa mumasocial network. Munyori: Milagros Lagneaux (2017); Speini.
Nhetembo dze Instagram: Masocial media ari kumutsiridza sei yekare art fomu. Munyori: Jessica Myers (2019); USA.
Iyo Nzira dzeVadiki vechidiki vadetembi. Iyo Yemagariro Network Ongororo yeContemporary Poetic Munda. Vanyori: Sabrina Pedrini naCristiano Felaco (2020); Itari.
Mifananidzo uye data pamabhuku anozivikanwa kwazvo eDefreds
Zvinenge netsaona. Kutanga, 2015. Edhisheni Mueve chete Lengua. 23 editions; makopi anodarika zana nemakumi masere akatengeswa.
Paunovhura parachuti, Edhisheni Fambisa Mutauro Wako. 12 editions; makopi anodarika 95.000 XNUMX akatengeswa.
1775 migwagwa, 2017. Edhisheni Mueve chete Lengua. 3 editions; makopi anodarika 55.000 XNUMX akatengeswa.
Nyaya dze hypochondriac castaway, 2017. Edhisheni Espasa. 11 editions; makopi anodarika 60.000 XNUMX akatengeswa.
Nekaseti uye bic pen, 2018. Edhisheni Espasa. 2 editions; makopi anodarika 35.000 XNUMX akatengeswa.
Nokusingaperi, 2018. Edhisheni Espasa; 2 editions; makopi anodarika makumi mana atengeswa.
Pamusoro pezvo, panguva ya2019 kuburitswa kwe Rangarira password e Zvisingagumi, inogamuchirwa zvakanaka neruzhinji nevatsoropodziwo zvavo.
Maumbirwo emabhuku Anopihwa
Ese maOffreds mabhuku anovhurwa nesumo neumwe munyori. Iyo budiriro ine chirevo chine madingindira anogona kubatanidzwa kune mumwe nemumwe kana, nekusiyana, mune nyaya dzinoratidzwa zvakateedzana pasina kuoneka hukama. Sekureva kweiyo portal yeiyo Virtual Raibhurari FANDOM (2020), nharo dzeimwe dzenhetembo dzake kuenderera kwechinyorwa chekare.
Mupfungwa iyi, munhu anogona kufunga nezve "Amores a Distancia 2" kubva 1775 migwagwa sechikamu chechipiri che "Amores a Distancia" na Zvinenge netsaona. Pakupedzisira, Zvipo zvinochengetera akateedzana emidhi-nyaya kana mitsara yekuvharwa kwemabhuku ayo. Kazhinji, zvinyorwa zvaro zvinoitwa nevamwe vanyori uye / kana zvine kutenda kwavo.
Synthesis uye kuongororwa kwemamwe emabasa ake
Zvinenge netsaona (2015)
Mune ino muunganidzwa weprose hapana protagonist, kana kutanga kana mhedzisiro kana tambo yekubatanidza. Mukuburitswa kwayo kwekutanga, Offreds inobata vateereri vayo kuburikidza nhevedzano yenyaya idzo vaverengi vanogona kuenderana nazvo. Zvinenge netsaona inoratidza tsitsi dzemunyori kushamwari dzake, nzvimbo dzinozivikanwa, kusuwa, kuora mwoyo, kusuwa kwemoyo ...
Zvakare zvinosanganisirwa mubhuku iri mune nhetembo dzechokwadi chaizvo, dzinenge dzepabonde dzakajeka, pamwe nedudziro yekutanga yenyaya yepasirese. Zviri pamusoro nhetembo Dzakashandurwa ngano, uko Offreds inoratidza chiratidzo chake chaicho che Little Red Riding Hood, Cinderella, mhumhi kana Nguruve Nhatu Diki. Mitsara:
"Ndiri mumwe wevanhu vakaseta alarm maawa mashanu apfuura, yeavo vanoverenga mabhuku emapepa muchitima uye vanofara."
"Zvese zvinoita kuti urote, izvo zvinoshandura mangwanani ako eChipiri kuita Mugovera masikati."
1775 migwagwa (2017)
1775 ndiyo nhamba yemigwagwa muVigo, iro guta rakakurira munyori. Chirevo chiri mubhuku iri chidimbu chemifungo inoenderana nenzvimbo ino. Mune imwe rúa, kunzwa; pakona yega yega, chiitiko. 1775 migwagwa Iyo ndeimwe yemavara apo Defreds yakanyanya kuzvininipisa uye yechokwadi, kuburikidza nemitsetse yakanyorwa nemoyo wakashama.
Iri ibasa rine huwandu hwekushoropodza hwave hunofadza nekuda kwechiratidzo chaicho chemusiki waro. Mukuwongorora kwakawanda kwekunyora vanoratidza kushamisika kwavo kune nhetembo isina kushongedzwa sekuchairwa nemanzwiro: kusuwa, kutya, kushuva ... Zvipo zvinotora vaverengi vayo kubva pachokwadi; "Zvandiri kuda kutaura zvinonzwisiswa neni chete." Chidimbu:
“Dzimwe nguva maminitsi mana uye makumi maviri nenomwe rwiyo rwechipiri runogona kukupa anodarika munhu mumwe. Uye vanhu avo nekutarisa kwauri vanoita kuti unzwe senge konsati yakanakisa yehupenyu hwako ".
Nyaya dze hypochondriac castaway (2017)
Ndiro bhuku rekutanga rakaburitswa naJosé Ángel Gómez Iglesias pasi pechinyorwa cheMhariri Espasa. Mune rino bhuku, vaverengi vanozvinyudza mune inogara ichingoitika mumunyori akafanotungamira mazita: kufamba zvakapfava nepfungwa dzake. Nekudaro, Offreds inoratidza mu Nyaya dze hypochondriac castaway maitiro ake akashanduka sei zvakafanana nehunhu hwake.
Kutaura chokwadi, zvinoita kunge zvisingaiti kubata mazwi eOffreds pasina kutevedzera mamiriro echokwadi chavo. (zvese munyori neruzhinji). Pamusoro pezvo, nebasa iri munyori akakwanisa kutora vateereri izvo zvisingawanzoitika nemhando yenhetembo: vechidiki nevechiri kuyaruka. Saizvozvo, mifananidzo yakanakisa yaDavid Olivas naCynthia Perie inomiririra mukwanisi wakakwana werugwaro runotaura zvakawanda nezverudo. Chikamu:
“Amai vanoti urikumupa nharo nedzungu rakanyanya. Unofanirwa kunge uine zvakawanda zvekuda kuburitsa musoro wako kunze uye kupemberera kunze kwenyika ”.
Nekaseti uye bic pen (2018)
Offreds inokwanisa "kusazvidzokorora" (zvichienzaniswa nemazita ayo apfuura) isina kurasikirwa neota yechokwadi kana magineti enhetembo maitiro. Zvinoreva kugona kukuru, nekuti Nekaseti uye bic pen, rakanga riri bhuku rechishanu remunyori rakaburitswa mukati memakore asingasviki matatu. Pachiitiko ichi, munyori anotarisana nenyaya yekupfuura kwenguva isingakundike nerudo rusingaperi, kunyangwe paine shungu uye almanac.
Nenzira imwecheteyo, zvitsauko zvebhuku rino ndezvekufananidzira kwekushanduka kwemafomu emimhanzi: Vinyl, LP, Kaseti, CD, Mp3 uye Spotify. Mune imwe prose, Offreds inobhadhara mutero kuvadudziri vakaita saDiana Quer, Pablo Ráez kana Gabriel Cruz. Mune vamwe, anotsanangura zvine mutsindo hunhu hunokosha hwemimhanzi mu Soundtrack yemanzwiro: rudo, kurwadziwa, kunyepedzera, kuora mwoyo, mufaro ... Fragment:
"Ndinoda kunakidzwa nenguva yangu ndega, kuzviziva zviri nani, kunakidzwa nekunyarara, bhaisikopo, rwiyo irworwo rwunonzwika zvakasiyana kana pasina munhu pamba."
Iri ibhuku rine akanyanya autobiographical maficha mukati mega-yekupedzisira saga rakaburitswa neOffreds, kusvika parizvino. Muchokwadi, zvitsauko zvitanhatu zvinopa zvinotevera zvinotevera: Kuzvarwa, Kukura, Kunyemwerera, Kuchema, Kurarama, Kurota uye Kufa. Senguva dzose, munyori haamire kugadzirisa misoro inonetsa yezvekufarira inoburitsa hoko muverengi. Pakati peavo: iyo kudheerera, kuzvivandudza, rudo rusina magumo kana kushungurudzwa.
«Ivo havazive nezve zvese izvo zvinokuvadza. Ye misodzi iyo inodonha, kana husiku hwacho hwawawo.
Ivo havazive kushungurudzika kwekufamba kubva kumba kuenda kukirasi.
Chidzitiro chechipfuva hachiwanzo bata.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Iwo Mipiro mabhuku
Nhoroondo yeMiguel Delibes